Puntland oo madaxweyne Farmaajo ku eedeysay talaabooyin caqabad ku ah doorashada Baarlamaanka – Kalfadhi
Puntland oo madaxweyne Farmaajo ku eedeysay talaabooyin caqabad ku ah doorashada Baarlamaanka
March 3, 2021 Hassan Istiila
Maamulka Puntland ayaa sheegtay in walaac ay ka muujineyso talaabooyin madaxweyne Farmaajo uu qaadayo oo carqaladeynaya dadaalada xalka loogu raadinayo caqabadaha hor taagan geeddi socodka qabsoomidda doorashada Barlamaanka iyo Madaxweynaha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa maalin ka hor maamuladda iyo Gobolka Banaadir isugu yeeray kulan lagu dhammeystirayo heshiiska doorashada, balse kulankaasi wuxuu u baaqday sidii kulamadii hore.
Puntland ayaa dhinaca kale sheegtay in ay u aragto dadaalada ay wadaan Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Midowga Murashaxiinta kuwo u gogol xaaraya jawi ay ku qabsoomi karaan shirar looga wada hadlo qabsoomidda doorasho loo dhan yahay, heshiisna lagu yahay.
Dowladda Puntland ayaa caddeysay inay markasta diyaar u tahay ka qaybgalka shirarka xalka loogu raadinayo qabsoomidda doorasho heshiis lagu yahay oo ku qotonta heshiiskii 17 September 2020.
“Dowladda Puntland waxay soo jeedinaysaa in shirarku ka dhacaan Garoonka diyaaradaha Magaalada Mogadishu, waxayna ka filaysaa Xafiiska Qaramada Midowbay iyo AMISOM inay diyaariyaan goobta iyo amniga shirarka. Dowladda Puntland waxay Wakiilada Beesha Caalamka uga mahad celinaysaa dadaalada joogtada ah ee ay la garab taagan yihiin Dowladda iyo Shacabka Soomaaliya.” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Puntland.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ka tacsiyadeeyay geerida Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya
Soomaaliya labadii todobaad ee la soo dhaafay waxaa horyaalay laba waddo midkood: